Intalli Maarti Luutar Kiing kan Baanon waa'ee Tiraamp dubbate kan hinfayyadne jetteen - BBC News Afaan Oromoo
Intalli Maarti Luutar Kiing kan Baanon waa'ee Tiraamp dubbate kan hinfayyadne jetteen
24 Caamsaa 2018
'Abbaan koo otoo jiraatee haala amma jiru kanaa baayyee gadda ture' Beerniis Kiing
Intalli falmataa mirga namoomaa beekamaa Maartiin Luutar Kiing, osoo lubbuun jiraatee hojii Tiraampitti 'ni boona' ture jedhuusaa mormiteetti.
Mal-dhahaa olaanaa duraaniin Pireezadaantii Doonaald Tiraampi kan tahe Istiiv Baanoon Miistar Kiing osoo lubbuun jiraatee Imaammata diinagdee pireeezidaantii Ameerikaa ishoo jedhee fudhata ture jechuun BBC tti himeera.
Beerniis Kiing garuu' Maqaa abba koo dogoggorsa fi maqsanii fayyadamuun balaa baataa' jetteetti
Inumaayyuu, abbaan ishee waan amma tahaa jiruun 'baayyee gaddaa' ture jetteetti
Baanoon, BBC tti yeroo himan 'Imaammata Tiraamp Maartiluutar, namni kamiyyuu, waan inni uummata gurrachaa fi hawaasa Hispaanikiif raawwate yoo ilaala ittiiin ni boonaa jedheera.
Maartiiluutar Tiraampiin boona ture jettee yaaddaa?' jechuun gaaffii gaazexeessituun BBC dhiyeessiteef.
MaartiiLuutar, Jabaadhu dubartootaa fi dhiiroota gurraachaa hojiitti bobbaasa jirta waan isa jedhu sitti hin fakkaatuu? jechuun deebise.
'Hojii dhabdummaan seenaa keenyatti arginee hin beeknee amma bayyaanachaa jira, kaffaltiin hojjettootaas dabalaa jira, bulguuwwan seeraan alaa hojii barabaacha dhufanii dorgomanii fi mana barumsaafi bu'uuraalee fayyaa barbadeessan dhaabeera. Sirrumaan ittiin Boona ture.'
Jechi isaa kuni takkumaan Atilaantikiin darbee, sab'himaalee Ameerikaa fudhate.
Hoggantuu wiirtuu Maartii Luutar Kiiing Kan Taate Beerniis, haasaan abbaanshee otoo jiraatee Tiraampiin deeggara ture jedhu sonawwan Luutar Kiing waan booddeetti dhiise dha jetteetti
Isa abbaan koo kabajaa fiieegumsa sanyii namootaa fi sabootaa hundaaf of kennee yaada dugda garagalfate dha' jetteetti
Silaa abbaan koo jechoota eenyumaa namaa salphisan kan akka 'bulguuwwan seeraan alaa' jedhu hin fayyadamu tur', 'qabsoo haqaa irratti garee isa tokko isa kaan irratti hin kaakaasu ture.
'Waan hoggantoonni hafarsaniin namoonni ija jabaatanii namoota irratti waan suukaneessu akka dubbatan taheera, keesumaa immoo godaantotaa fi gurraachota irratti.
Obbo Baqqalaa Garbaa: Ejjannoon nuti qabsoo karaa nagaarratti qabnu walfakkaata
Obbo Baqqalaa Garbaa mana hidhaa wayita turanitti kitaabota argatan dubbisaa turan keessaa tokko kan Luba Dr Maartiin Luuter Kiing Xiqqicha ture. Dubbisuun alattis gara Afaan Oromootti hiikuun uummata biraan gahuuf carraaqaniiru, toftaa qabsoo isaaniis hordofaa jiru.
5 Ebla 2018
'Shaashamanneetti namoonni man-kuusaatti hidhaman seeratti hin dhiyaanne' - Jiraattota
9 Hagayya 2020
KALLATTIIN Itoophiyaatti lakkoofsi namoota Covid-19n qabamanii kuma 22 ol ta'e
Haleellaan niiwukilaraa US waggoota 75 dura Jappaanirratti raawwatte akkamiin yaadatama?
Dhaddachi qorannoo duraa maali?, Golgaa duubaa ragaa bahuun hoo?
'Manneen murti ajaja kennan dirqisiisanii raawwachiisuu danda'u' - Aanga'aa Mana Murtii
Jawaar dabalatee nama 14 irratti jechi ragaalee Abbaa Alangaa dhagaahamuufi
'Covid-19 yoo dubbataniifi yoo dhukkubsatan gargari' - Ittiiqaa Tafarii